विश्वविद्यालयमा पहिले पद्धति- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रा. तारानिधि भट्टराई
भाद्र १९, २०७६ प्रा. तारानिधि भट्टराई
अघिल्लो महिना प्रायः सञ्चार माध्यमले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेको हुनाले नयाँ उपकुलपतिहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । सबैजसोको ध्यान देशको जेठो उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा केन्द्रित थियो ।
त्यही बेला कुलपतिको कार्यालयले उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि सम्भावित योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) को अध्यक्षतामा समिति गठन गर्‍यो । समितिले तोकिएको समयमा नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि त्यसको म्याद भदौ २० सम्म बढाइएको छ ।
भदौ पहिलो साता कुलपतिको कार्यालयले त्रिवि शिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपतिमा कायममुकायम नियुक्ति दिएपछि भने सञ्चार माध्यम शान्तप्रायः छन् । जबकि यो शून्यतामा झनै गहन र बौद्धिक बहसको टड्कारो आवश्यकता पर्छ । किनभने सञ्चार माध्यममा यसअघि देखा परेका विचार–विमर्शलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । यो लेख यसै विषयमा केन्द्रित छ ।
उपकुलपति नियुक्ति सम्बन्धमा, कसैले त्रिविमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएर सम्पूर्ण काम यसैमार्फत गर्नुपर्ने बताएका छन् भने, कसैले विश्वविद्यालय बुझेको, समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको बौद्धिक व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुने तर्क पेस गरेका छन् । नामै तोकेर वा अप्रत्यक्ष रूपले केही महानुभाव नियुक्तिको दौडधुपमा निक्लिएको खबर पनि सञ्चार माध्यममा आयो ।
अचम्म के भने, देश संघीयतामा गैसकेपछि त्रिविलाई (जसका आंगिक कलेज सातै प्रदेशमा सञ्चालित छन्) व्यवस्थापन गर्न एउटा नयाँ संरचनागत एवं प्रणालीगत पद्धतिको आवश्यकता पर्छ र त्यसका लागि बहस जरुरी छ भन्ने विचारकहरू अत्यन्त थोरै देखा परे । चर्चामा रहेका वरिष्ठ शिक्षाविद्हरूले पनि यो कुरालाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी उजागर गरिदिएनन् ।
जजसको नाम उपकुलपति हुने चर्चामा थियो, उनीहरूले पनि पहिलो आवश्यकता उच्चशिक्षा पद्धतिकै हो भनेर पदमोह भङ्ग गर्न सकेनन् । यसमा बरु कुलपतिको कार्यालय सचेत देखियो र उपकुलपतिको नियुक्ति हतारमा नगरी समितिको म्याद बढायो ।
त्रिविमा झाँगिएका विसङ्गतिहरूको जरो सतहमा छैन भन्ने त प्राप्ताङ्क हेरफेर गरी अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण बनाइएको सेवा आयोग सम्बन्धी खबर र नौ नम्बर ल्याएकालाई उनान्सत्तरी बनाई ‘गोल्ड मेडल’ दिलाइएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सम्बन्धी समाचारले स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यस्ता अनियमितता एक चोटि मात्र भएका थिए भनेर ढुक्क हुने कुनै आधार छैन र भविष्यमा दोहोरिन नदिने प्रण पनि पदाधिकारीहरूले गर्न सकेका छैनन् । निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य प्रकाशमा आइसकेकै छ ।
आर्थिक चलखेलमार्फत सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई परेको नकारात्मक प्रभावले समाजलाई पुर्‍याउने असरको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेका विपरीतधर्मी क्रियाकलाप पनि सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । मतलब, समस्या व्यक्ति वा कुनै एउटा पदमा मात्र सीमित छैन, यो त अहिले कायम पद्धतिमा झन् बढी छ ।
विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकास गर्ने अतुलनीय थलो हो भने, शिक्षकहरूका लागि अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने–गराउने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक स्थल पनि हो । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा शोधपत्रका लागि गरिने प्राज्ञिक क्रियाकलापले विद्यार्थीलाई परीक्षा उत्तीर्णका लागि आधार मात्र दिँदैनन्, सत्य–तथ्यमा आधारित तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर समाजको तल्लो तहसम्म पारिस्थितिकीय चेतना फैलाउनेदेखि समाज रूपान्तरणको माथिल्लो तहको नीति निर्माणमा समेत भरपर्दो टेवा पुर्‍याउँछन् ।
विश्वविद्यालय र समाजलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा जोड्ने कडी पनि यही हो, जसका माध्यमले समस्याको पहिचान, सामाजिक संवादको तरिका, सूचनाको प्रवाह र सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर सामाजिक एकता मजबुत हुँदै जान्छ । यस विपरीत त्रिविमा भने केही वर्षयता स्नातकोत्तर तहमा शोधपत्र लेख्ने केही विद्यार्थीले अरूको नक्कल गरेको वा अर्कै मान्छे लगाएर लेखाएको यथार्थ प्रकाशमा आइसकेको छ ।
यस्तो गलत कार्य विद्यार्थी एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन भनी जान्दाजान्दै पनि त्रिविका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । यसले एकातिर मेधावी विद्यार्थीमा नैराश्य फैलाएको छ भने, अर्कातिर त्रिविको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्काएको पनि छ । अर्काको शोधपत्र सारेर विद्यार्थीहरू धमाधम उत्तीर्ण भएका मात्र छैनन्, उनीहरू देशका विभिन्न निकायका जिम्मेवार पदमा कार्यरत पनि छन् ।
आफ्नो बौद्धिकता नतिखारी अरूले गाँसेको माला लगाएर कार्यक्षेत्रमा उत्रिएका ती ‘होनहार’ युवायुवतीलाई सच्चिने मौका नदिने हो भने हाम्रो समाज कता पुग्ला ? अब नियुक्त हुने उपकुलपति एक्लैले यो विकृति हटाउन सक्लान् त ? उत्तर सहज छैन । किनभने पूर्वउपकुलपतिहरू पनि यो विकृतिलाई प्रोत्साहन दिन पक्कै चाहँदैनथे ।
त्रिविमा शिक्षकहरूले वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व प्रश्नको घेरामा परेको छ । कतिपय विषयमा विद्यार्थी भर्ना छैन । कामै नगरी शिक्षकले तलब पाइरहेका छन् । अर्कातिर कतिपय विषयमा विद्यार्थी चाप बमोजिम शिक्षक दरबन्दी छैन । विद्यार्थी भर्नाको स्थिति पनि अव्यवस्थित छ । कुनै–कुनै कलेजमा विद्यार्थी चाप धानिनसक्नु छ भने, कतै विद्यार्थी तोकिएको संख्याभन्दा पनि न्यून छन् । प्रवेश परीक्षा नाम मात्रको भएको छ ।
आवेदक सबै विद्यार्थीले भर्ना पाउनुपर्छ भन्ने अघोषित नीति छ । विज्ञानको स्नातक तहमा म्यादै नभए जस्तो कक्षा सुरु भएको केही महिनासम्म पनि भर्ना लिइरहनुपर्ने स्थिति भएका कलेजहरू राजधानीमै छन् । यी विसंगतिसँग पूर्वउपकुलपतिहरू पनि भलिभाँती परिचित थिए नै, चाहेर पनि स्थिति सुधार्न सकेनन् । नसक्नुको कारण पनि कतैबाट सार्वजनिक भएन ।
विश्वविद्यालयलाई विचारको उत्पादन, मन्थन र परिमार्जन गर्ने उद्गमस्थलका रूपमा लिइन्छ । यो महान् कार्य त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाको थलोका रूपमा स्थापित गरिन्छ । अहिलेसम्म जे भयो, त्यो प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धा थिएन । राजनीतिक अस्थिरता देखाएर दलीय भागबन्डा प्राप्त गर्नेले पनि प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको उदाहरण छैन ।
किनभने दलीय भागबन्डामा विश्वास गर्नेहरूमध्ये पनि जो अब्बल र सक्षम थिए, उनीहरूलाई नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने मौकै दिइएन । ‘आफ्नो मान्छे’ भएपछि सेवानिवृत्त हुनु वा नहुनुले पनि फरक परेन । फलस्वरूप प्रशासन सञ्चालनमा मेरुदण्डका रूपमा रहेको ‘चेन अफ कमान्ड’ लगभग निष्क्रिय भयो । यो विडम्बनायुक्त परिस्थितिले त्रिविलाई मात्र ध्वस्त बनाएको छैन, हाम्रो समाजलाई नै नैराश्यमा धकेलेको छ । हाम्रा मेधावी र होनहार युवायुवतीलाई विदेसिन बाध्य पार्ने एउटा कारक तत्त्व यो पनि हो ।
त्यसैले सबैले पत्याएको एउटा उपकुलपतिले मात्र यो समस्यालाई सम्हाल्न सक्ला त ? यो अहं सवालको जवाफ उच्च शिक्षाविद्हरूले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । यसको सोझो अर्थ हो— एउटा योग्य उपकुलपतिको आवश्यकता अवश्य छ, तर त्यति मात्रले पुग्दैन । त्रिवि सम्हाल्न समयोचित प्रणालीगत पद्धतिको आवश्यकता छ ।
त्रिविको सञ्चालन यसको आफ्नै ऐन–नियमको अधीन रहेर हुन्छ । अहिले यसको सञ्चालन त्रिवि ऐन, २०४९ को मातहतमा रहेर विभिन्न समयमा बनाइएका नियममार्फत भइरहेको छ । जब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाले प्रश्रय पायो, तब आफ्नो अनुकूल हुने गरी नियम पनि संशोधन हुन थाले । तसर्थ अहिले कार्यान्वयनमा रहेका नियमहरूलाई संशोधन नगर्ने हो भने, दलीय भागबन्डाको आधार नासिँदैन र सर्वसाधारणको चासो अनुरूपको ‘प्राज्ञिक संस्था’ का रूपमा त्रिविलाई विकास गर्ने सम्भावना पनि झिनो भएर जान्छ । नियम संशोधन राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सम्भव हुन्छ ।
किनभने दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका विभिन्न पदाधिकारी (जोसंँग नियम संशोधनको प्रक्रियामा भाग लिने र निर्णय गर्ने हैसियत हुन्छ) को पदावधि अझै कायम छ । अर्कातिर, यो सन्दर्भ अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय पनि बनेको छैन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता उपकुलपतिको नियुक्तिभन्दा पनि भागबन्डा अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो, जसबारे स्पष्ट अवधारणा बाहिर आएकै छैन ।
प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने पद्धतिको कुरा गर्दा, हाम्रो देशका केही संस्थालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जस्तै— सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिको नियुक्तिका लागि ज्येष्ठतामा आधारित पद्धति छ र सोही अनुरूप कामकाज चलिरहेकै छ । यता त्रिविको हकमा भने, यसको नियममा ‘उपकुलपति प्राज्ञिक विशिष्टता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनेछ’ लेखिएकाले ‘समुद्रमा मोती खोजेझैं’ धेरै प्राध्यापकमध्येबाट एक छान्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्रिविका सबै प्राध्यापक प्राज्ञिक विशिष्टताप्राप्त व्यक्ति हुनाले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा गठित समितिले नाम सिफारिस गर्न गाह्रो देखिँदैन । तर नियुक्ति पाउँदैमा नयाँ उपकुलपतिले त्रिविका विसङ्गतिलाई सम्बोधन गर्न सहज छैन । त्यसैले उसलाई ‘प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठतालाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नू’ भन्ने नीतिगत निर्देशनसहित नियुक्ति दिनु त्रिविलाई सम्हाल्ने एउटा गहकिलो उपाय हुनसक्छ ।
लेखक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:३६
भाद्र १९, २०७६ सावित्री गौतम
आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छजाऊ चेली आफ्नै घर अंश पाइन्छ...ठ्याक्कै तीन वर्ष भयो, यो पुरानो तीज गीतको एउटा अन्तराले दिमागमा ठोक्न थालेको । यही गीतले ठोक्न थालेपछि नै केही वर्ष अगाडिसम्म रहेका तीज सम्बन्धी मेरा मान्यता अचेल क्रमशः भत्किन थालेका छन् ।
सबैभन्दा बढी त यो र अरू थुप्रै तीज गीतकै कारण ‘माइती र चेलीको आत्मीयता दर्शाउने’ चाडका रूपमा मैले चिन्दै आएको तीज अचेल विरानो लाग्न थालेको छ । नत्र तीज सम्बन्धी मेरा मान्यता यस्ता हुन्थे— विश्वमै यस्तो ‘मौलिक’ चाड कतै छैन । वर्षमा एक दिन महिलाले ‘उन्मुक्त’ भएर नाच्ने चाड ! ‘माइत’ जान र ल्याउन नपाएर रुवाबासी गरिरहेका दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बाबुआमा ! यस्तो पो त माइती र चेलीको ‘आत्मीयता’ ! कोमल वलीहरूले पो बिगारेका, नत्र तीजका गीत त विश्वमै सबैभन्दा उत्कृष्ट !
बिहे गरेको सुरुदेखि ‘तीजमा माइत जाने’ प्रचलन नधानेकी आमाकी छोरी मेरा लागि पनि तीज कहिल्यै ‘माइत’ गएर मनाउने चाड बनेन । मुग्लिङ–नारायणगढको झन्झटिलो बाटो सम्झेर ‘बर्खाको समय भएकोले मरिमेटी गरेर जानु नपर्ने, एक महिना मात्र कुरे दसैंमा भेट भइहाल्ने’ भन्ने हरफ जपेर पोखरामा बस्थेँं ।
तर वरिपरिका महिला ढल्की–ढल्की माइत गएको देखेको झोँकमा म यहाँ बोलाउने संस्था र साथीकहाँ दर खान पुग्थेँं । नाचगानमा सहभागी हुन्थेंँ । ‘आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छ’ जस्ता अनेक गीतले दिमागमा ठोक्न थालेपछि उक्त काम लगभग बन्द भएको छ ।
तीजको मिथकीय 'मौलिकता’
धार्मिक मान्यता अनुसार हिमालय पर्वत र मेनकाकी छोरी पार्वतीले आफ्ना बाबुआमाले आफूलाई नसोधिकनै आफ्नो बिहे भगवान् विष्णुसँग गरिदिने सल्लाह गरेको सुन्छिन् । तर उनले सानैदेखि महादेवलाई पतिका रूपमा चाहेकी थिइन्, जुन पूर्वजन्ममा उनका पति थिए भनेर वर्णन गरिएको छ ।
राजकुमारी हैसियतकी पार्वतीले पनि म विष्णुसँग होइन, महादेवसँग बिहे गर्छु भनेर खुलस्त भन्न सक्दिनन् र घरबाट भागेर जंगलमा गई तपस्या गर्छिन् । सबै कुरा ध्यानदृष्टिले हेर्न सक्ने महादेवलाई सानैदेखि यो केटीले आफूसँग बिहे गर्न चाहेकी हो भन्ने कुरा थाहा हुन नसक्ने कुरै थिएन । तर उनैको तपस्याबाट प्रसन्न भएका महादेवले उनको ‘चरित्र विचार’ गर्ने मौका गुमाउँदैनन् र उनलाई इन्द्रको रूप लिएर लोभ्याउन थाल्छन् ।
पार्वती श्राप दिन तयार भएपछि हत्तपत्त ‘म महादेव हुँ’ भन्छन् । त्यस्तै ऋषिपञ्चमीको पूजा त्यस्तो पूजा हो, जसमा महिलाले महिनावारी भएका बेला वर्षभरि नजानेर गरेका पाप, अर्थात् झुक्किएर भान्सा छोएका जस्ता ‘पाप’ कट्टी गर्न विशेष विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्छ । पूजा सकेपछि कसरी महिनावारी भएका बेला भान्सा छोएकै कारण कुनै आमा आफ्नै छोराको घरमा कुकुर्नी भएर र उसका पति गोरु भएर जन्मिएका थिए भन्ने कथा पनि सुनाइन्छ ।
पार्वतीले त जंगलमा गएर, एक्लै बसेर, घुर्क्याएर बाबुआमालाई मनाउन कोसिस गरिन् भन्न मिल्ला । आजका पार्वतीको दिनसम्म आइपुग्दा त उनीहरूले ‘म फलानोलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउँदै छु’ भनेको कुरा उनीहरूको नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हुनुपर्ने हो । तर आजसम्म पनि नेपाली घरहरूमा कैयौं पार्वती छन्, जो अन्य जातसँगको वा आफूसँग धनसम्पत्ति वा पढाइ–लेखाइ नमिलाई गरेको ‘प्रेम’ सफल होओस् वा सकेसम्म त्यस्तो परिवारले नस्वीकार्ने खालको प्रेम नै नपरोस् भनेर निराहार व्रत बस्न बाध्य छन् । अर्का थरी विवाहित पार्वती छन्, जो लोग्नेको कमाइ खान पाएकामा ‘कृतज्ञ’ छन् र उसका लागि ‘प्रेम र सद्भाव’का नाममा व्रत बसेर कृतज्ञता जाहेर गर्छन् ।
समाजको संरचना आजसम्म पनि यस्तो छ, लोग्नेमान्छेले प्रशस्त पैसा कमाएर स्वास्नी र छोराछोरी पाल्नुपर्छ । त्यसैले बहुसंख्यक बाबुआमा यस्ता लोग्नेमान्छेको सुरक्षा र लामो आयुको ग्यारेन्टी आफ्ना छोरीहरूले व्रत बसिदिएर गर्नुपर्छ भनी सोच्छन् । मृत्यु जस्तो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट कोही पनि वञ्चित छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बाबुआमा छोरीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन्जेल घरमा बस्न दिँंदैनन् । पढाइ समेत पूरा गर्न नदिई ‘राम्रो’ कमाइ भएको ज्वाइँको जिम्मा लगाउन हतारिन्छन् ।
अनि जिन्दगीभर ज्वाइँको ‘सुरक्षा’ छोरीले चुरापोते उनिदिएर र तीजको व्रत बसेर गरिदेओस् भनी कामना गरिरहन्छन् । यसो नगरेकैमा ज्वाइँलाई ‘केही’ होला र त्यसपछि हुने छोरीको बिजोग नहेर्न र कथंकदाचित् त्यो बिजोगपछिको सम्पूर्ण झन्झट आफूले ब्यहोर्नु नपरोस् भन्ने त्रासबाट बच्न उनीहरू झुन्डिने आशाको एक मात्र त्यान्द्रो हुन्छ । त्यो हो— छोरीले लगाइदिने चुरापोते र वर्षको एकपटक बसिदिने तीजको व्रत ।
'आत्मीय तीज’ : फगत एक भ्रम
सामाजिक रूपमा तीज कुनै–कुनै भेगका खस–आर्य समुदायका महिलाले वर्षभरि खान–लाउन नपाएका कारण माइतीले एकजोर लुगा हालिदिने र बर्खाभरिको थकाइ माइत गएर मेट्ने चाड हो भनेर अनगिन्ती पटक व्याख्या भइसकेको छ । विष्णु माझीको बहुचर्चित गीत ‘झन् माथि सार्छु, झन् तल झर्छ, हाइ मेरो फरिया’ गीतले भनेको छ, ‘मुन्टोले टेकेर भए पनि माइत आउँछु, पखाला लागे पनि पेटभरि खान्छु, हेर त बाआमा तिम्री छोरी कस्ती थिई, आज हाड मात्रै बाँकी छ’ आदि ।
बिमाकुमारी दुराको पुरानो गीत छ, ‘घ्यु भरेर राखे आमा फूल भरेको टिनमा, बाँचे भेट होला आमा वर्षदिनमा’ । यस्ता गीत अनगिन्ती छन् । लोग्नेको घरमा खान नपाउने महिलालाई जुन घरबाट कुशको टुक्रो छिनालेर ‘आजदेखि तँ हाम्रो घरको सदस्य रहिनस्’ भनेर बर्खास्त गरेर, ‘गोत्र सारेर’ कन्यादान गरेर पठाइएको हुन्थ्यो, अर्थात् पैतृक घर, त्यहीँ गएर उनीहरूले वर्षको एकपटक पेटभरि खान पाउने आस हुन्थ्यो । उनीहरू आफ्ना भोगाइलाई गीतका रूपमा गाउँथे र वरिपरिका मान्छे धरधरी रुन्थे ।
तर लोग्नेको घरमा खान नपाएकी ‘चेली’लाई दर खुवाउन लालायित तिनै बाबु वा दाजुभाइले फेरि छोरी, दिदीबहिनीले ऋषिपञ्चमीमा व्रतको दीयो माग्दा ‘छोराहरूलाई चाहिन्छ’ भन्ने जवाफ दिएको र सम्पत्ति माग्दा ‘आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छ’ भनेका गीत प्रचलित छन् ।
त्यसैले यो ‘आत्मीयता’ त्यतिन्जेल धरापमा पर्दैन, जबसम्म छोरीहरूले ‘माइत’ आएर केही नबोल्ने, पस्केर दिएको दुईछाक चिल्लो भात खाने, देखाइदिएको बिस्तरामा सुत्ने, जाने बेला दुई–चार रुपैयाँ र बढीमा एकजोर लुगा पोको पारेर सुरुक्क जानेभन्दा बढी माग गर्दैनन्, जबसम्म उनीहरू ‘बिहे गरेका आफ्ना दाजुभाइको हैसियत र बिहे गरेकी आफ्नो हैसियत बाबुको घरमा असमान कसरी भयो’ भनेर कुरा उठाउँदैनन् ।
अर्काति, ‘जाऊ चेली आफ्नै घर अंश पाइन्छ’ भनेको ‘आफ्नो’ अर्थात् लोग्नेको घरमा चल–अचल सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार कति छ, सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । आजसम्म पनि नेपाली घरहरूमा ससुराले मर्ने बेला मात्रै छोरा अर्थात् महिलाको लोग्नेलाई र कथंकदाचित् लोग्नेको असामयिक मृत्यु भएमा ‘बुहारी पोइल जान्छे’ भनेर नाति अर्थात् महिलाको छोरालाई र त्यो पनि अठार वर्ष पुगेपछि मात्र अंश दिने हो ।
त्यसमा पनि छोरी भए वा महिला निःसन्तान भए त त्यो आश पनि बन्द हुन्छ । ‘चेली’ले दुःख बाँड्ने चाडका रूपमा चिनिएको तीजको विरोधाभास यस्तो छ, चेलीले माइतीले आफ्नो दुःख थाहा नपाऊन् भनेर मागेर भए पनि झपक्क लुगा–गहना लगाएर माइत जानेसमेत चलन छ । बाढीमा बगेर मृत्यु भएकी एक बुहारीका तर्फबाट गाइएको एउटा पुरानो गीत नै छ, ‘बाबाले भन्नुभयो कान्छी छोरी पियारी, ससुराले भन्नुभयो गहना बिगारी’ । गीतहरूले गरेको व्याख्या मात्र होइन, सामाजिक व्यवहार नै हेर्ने हो भने पनि खस–आर्य महिलाले न आफ्ना बाबुआमाकहाँ सम्मानजनक र समान व्यवहार पाएकाछन्, न त सासू–ससुराकहाँ । त्यसैले ‘आत्मीयताको प्रतीक तीज’ फगत एक भ्रम हो ।
'मौलिकता’ का बर्दीधारी 'मोरल पुलिस’
आफूमाथिका पचासौं असमानता र अपमान थाहा नपाएरै वा पाएरै नेपाली महिलाले तीजलाई ‘उन्मुक्ति’को पर्व भन्ने भ्रममा वर्षदिनभरिका पीडा एकदिन नाचेर बिर्सने कोसिस गर्छन् । अलिअलि भए पनि सामाजिक मान्यता बदलिइरहेका पनि छन् । हिजोसम्म माइत गई बुहारीलाई कजाएर ढसमस्स बसेर दर खाने केही आमाजूले आज बुहारीलाई आफूकहाँ दर खान बोलाउन थालेका छन् ।
थोरै संख्यामा भए पनि महिला साक्षर र हिम्मतिला बनेका छन्, अनि आफूलाई अभिव्यक्त गर्न तीज नै पर्खिन नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले वर्षभरिका आफ्ना भोगाइलाई सीधै सासू–ससुरा वा लोग्नेलाई भन्न थालेका छन् । वा गीत, कविता, दैनिकीका रूपमा कापीमा उतार्न वा सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामा लेख्न सक्ने भएका छन् ।
बदलिएका सम्बन्धसँगै तीजका गीत पनि बदलिँंदै छन् । तीजका गीतमा पहिलाको जस्तो ‘दर्द’ नदेखिनुमा यी कुरा पनि पक्कै कारक हुन् । तर आज पनि समाज र प्रशासनको ‘मोरल पुलिसिङ’ महिलाको हाउभाउ, खानपान र उनीहरूका अभिव्यक्ति सबैतिर कायम छ । उनीहरूलाई बिहे गर्ने उमेर भयो, बिहे गर्न पाऊँ अर्थात् ‘पोइल जान पाम्’ भनेर गीत गाएकी कोमल वलीको छाडापनको खुब चिन्ता छ । कुनै पुरुषलाई उनलाई हियाउन यतिसम्म छुट छ, उसले ‘दुई बीस हिउँद काटेकीलाई मैले ल्याउन पाऊँ’ भन्दै गीतै गाउन पाउँछ ।
‘आमाले पकाएको मिठो दर’का नाममा गाइने गीत वा ‘आमाको माया’ वा ‘घरको खाना’ क्याप्सनसहितका फोटो हेर्दा झलक्क दिमागमा आउँछन्, वर्षौंसम्म हरेक दिन घण्टौंको भान्साभित्रको श्रमले हायल–कायल भएका आमाहरूका तस्बिर । पारिश्रमिक नपाउने, रैथाने खानपान पकाउने अव्यावसायिक काममा आखिर घरका महिलाको असीमित श्रम नै त परेको हुन्छ !
तीजको ‘मौलिक’ दरको पृष्ठभूमि पनि त आखिर हरेक वर्ष भदौको भाइरल ज्वरोले सिकिस्त, ढाड दुखेर अमिलो मुख लगाएका, आँखा पाकेको बेलासमेत भान्सामा खटेका आमा न हुन्, जसले पूरै जिन्दगी घण्टौं भान्सामा रापिएर बिताएका छन् । थोरै महिलाले भए पनि अब हायल–कायल, थकित आफ्नी वृद्ध आमाले पकाएको दरलाई ‘मिस’ गर्न छोडेका छन् । आफूले कमाउन थालेका छन् र साथीहरू जम्मा भएर दर होइन, ‘भोज’ खान थालेका छन् । बरु नजिकै भए आमालाई नै खान बोलाउन थालेका छन् । पकाइदिने र भाँडा माझिदिने व्यक्तिको श्रमको मूल्य तिरेर भोज खाएका छन् । उत्पीडनको साटो मायाप्रेम र उल्लासका गीत गाउन थालेका छन् ।
गण्डक क्षेत्रमा कृष्णअष्टमीदेखि तीज भित्रिएको मानिन्छ, र त्यही दिनदेखि चेलीलाई लिन जाने, घर–घरमा जम्मा भएर खाने र गीत गाउने चलन छ भनिन्छ । त्यसैको परिमार्जित स्वरूप पार्टी प्यालेसमा पुगेको छ । त्यस्तै सांस्कृतिक अन्तरघुलन बढ्दो छ, फरक–फरक जाति–समुदाय मिसिएर बनेका छिमेक छन् ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण ‘रक्सी चल्ने’ घरका महिला रक्सी नचल्ने घर वा नचल्ने घरका महिला चल्ने घरमा भित्रिएका छन् । यही कारण पनि रक्सीजन्य पदार्थ यस्ता भोजमा समावेश भए होलान् वा जेसुकै कारणले भए होलान् । कसैले महिलाको थाल र गिलासमा आँखा गाडेर टाउको किन दुखाउनुपर्ने ?
समाजमा जसरी भए पनि चर्चामा आउन खोज्ने केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हुन्छन्, जो कहिलेकाहीँ आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गर्दै प्रशासनलाई अन्टसन्ट कुरा लिएर ज्ञापनपत्र बुझाउन जान्छन् । यस्ता लहडमा फस्नमा कास्की प्रशासन सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । केही वर्ष अगाडि पोखरामै एक व्यक्तिले आफ्नो टोललाई ‘तेस्रोलिंगी निषेधित क्षेत्र’ बनाउनका लागि लिएर गएको ज्ञापनपत्रमा पनि कास्की प्रशासनले आँखा चिम्लेर ‘हुन्छ’ भनिदिएको थियो ।
यो पटक पनि उसले केही व्यक्तिको इसारामा तीजलाई ‘मौलिक’ तरिकाले मनाउनुपर्ने, ध्वनि प्रदूषण गर्न नपाइने, प्रशासनले सूक्ष्म निगरानी गर्ने आदि भनेर उर्दी जारी गरेको छ । ‘मौलिकता’ भनेको के ? अब फेरि महिलाले ‘घ्यु भरेर राखे आमा फूल भरेको टिनमा’ भन्दै माइत गएर पेट भर्नुपर्ने ? ससाना डेरामा बस्ने महिलाले घरभित्र उमारेको कर्कलो कहाँबाट ल्याउने ? हरेक दिन घरबेटीले चप्पल गन्ने घरमा डेरा गरेर बस्ने महिलाले दर खुवाउनुपर्ने पाहुनालाई पार्टी प्यालेसमा नलगेर कहाँ लैजाने ? दर खाने दिनसमेत छुट्टी नपाउने जागिरे महिलाले साँझ आएर पाहुनाका लागि ‘मौलिक’ दर कतिबेला पकाउने ?
मौलिकतातिरै फर्कने भए अब प्रशासनले बिहेका भोजमा बाह्रथरी मेनु नराख, पहिलाको जस्तै टपरीबाट मासको दाल चुहाउँदै चौरमा बसेर बिहेको भतेर खाऊ भनेर उर्दी किन नगर्ने ? तीजका नाममा अन्तरक्रिया र मेलाको आयोजना गर्न किन दिने ? ‘तीज’का नाममा गरिने अन्तरक्रियामा हुने खर्च र खाने खाजाचाहिँ संस्कृति र महिलाले भाषणबाजी नगरी खानेकुरा खाई नाचेर मात्रै हिँंडे त्यो विकृति कसरी हुने ? भोज खाए विकृति हुने तर विभिन्न संघ–संस्था वा समूहले व्यापार गरे, मेलाको नाम दिए ती मेलामा महिलाले भोज खाएर गर्नेजति वा त्योभन्दा पनि बढी खर्च गरेर सामान किने त्यही फेरि संस्कृति कसरी हुन्छ ?
ध्वनि प्रदूषण र होहल्लाप्रति यति विघ्न चिन्तित प्रशासन वर्षभरि जन्मदिन, विवाह, व्रतबन्ध आदिमा घन्किरहने पार्टी प्यालेसलाई साउन्ड प्रुफ र भिडभाडरहित बनाऊ र बाटोभरि असरल्ल पार्किङ नगर भन्न किन सक्दैन ? चौतर्फी विरोध भएपछि कास्की प्रशासनले ‘दर्ता नभएका संस्थालाई टिकट बेच्नबाट रोक्न यस्तो गरेको’ भनेको छ ।
आफूकहाँ ज्ञापनपत्र लिएर आउने ‘संस्था’हरूचाहिँ दर्ता भएका हुन् कि हैनन् ? गण्डकी प्रदेश सरकार र कास्की प्रशासनले आफूलाई पनि पक्कै सोधे होलान् । गणतन्त्रमा एउटा नागरिकले बिहेको, व्रतबन्धको, प्रेममा परेको वा प्रेममा बिछोड भएको वा तीजको जुनसुकै शीर्षकमा होटल वा पार्टी प्यालेसमा गएर भात खान अवश्य पाउँछ । यसमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्न खोज्नु हास्यास्पद हो । स्थानीय सरकार र प्रशासनले केही व्यक्तिलाई विशेष कृपा गरिरहेकै कारण संस्कृति र विकृति अनि दर्ता र ‘अदर्ता’को यो फरक परिभाषाको प्रहसन सम्भव भइरहेको छ ।
तीजकै सान्दर्भिकता अब कति ?
प्रशासन वा समाजको मुर्खताभन्दा बढी अब तीज चाड नै कति सान्दर्भिक छ भन्नेचाहिँ मुख्य हो । कुनै समय तीजको गीतमा आफ्नो भोगाइ, वर्षभरि देशमा घटेका घटना बताएर महिलाले आफैमा सञ्चारको काम पनि गरेका थिए । पछिल्लो क्रममा त गीतमार्फत राजनीतिक चेतना पनि पोखेका थिए ।
तर तीजको विशेषता र यसका गीतको सिर्जनात्मकता भनेको लोग्नेको घरमा खान नपाउनु र मनका कुरा व्यक्त गर्न नपाउनुको बाई–प्रोडक्ट नै हो । तर कहिलेसम्म महिलाले लोग्नेको घरमा खान नपाएर तीज कुर्नुपर्ने ? लोग्ने वा सासू–ससुरालाई आफ्ना अप्ठ्यारा निर्धक्क भन्न नपाएर तिनलाई गीत बनाई कहिलेसम्म गाइरहने ?
कहिलेसम्म हामी साथमा कुनै चल–अचल सम्पत्ति नहुने कारणले सधैंभरि डगमगाएको आत्मविश्वास लिएर हिँंडिरहने अनि ‘माइती’ले दिएको दुईछाक भात र एकजोर कपडाको दयालाई आत्मीयता ठान्ने ? वर्षभरिको दमन र असमानतालाई एकदिन गीत गाएर गरेको ‘कथार्सिस’ अर्थात् विरेचनलाई कहिलेसम्म ‘उन्मुक्ति’ र ‘सिस्टरहुड’को नाम दिएर मनाउने ? जुन चाडको जग नै दमनकारी छ, त्यसको पुनर्परिभाषा गर्न कतिन्जेल पर्खिने ? देशमा छाउपडीलाई फौजदारी अपराध घोषित गरिएको छ ।
तर अझै पनि वर्षभरि महिनावारी भएका बेला भान्सा छोएको ‘पाप पखाल्न’ भनेर गरिने ऋषिपञ्चमीको पूजामा सहभागी भएर कहिलेसम्म महिनावारी पाप हो भनेकै कुरालाई समर्थन गरिरहने र सहरिया छाउपडी पालन गर्ने ? त्यसमाथि हामीजस्ता ‘पढेलेखेका’ भनिनेहरूले ‘गाउँघरका र नपढेका महिलाका लागि तीज आवश्यक छ’ भन्दै कहिलेसम्म उनीहरूलाई हेपिरहने ? ‘सिस्टरहुड’ र ‘रातो शक्ति’का नाममा महिलाको शोषण र उत्पीडनको इतिहास बोकेको तीजलाई प्रश्रय दिँंदै आफूलाई ‘चेतनशील’ भनिरहेका हामीले चाहिँ आफ्नो चेतनालाई कहिले प्रश्न गर्ने ?
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:३४